Qaar kamid ah isgoysyada iyo wadooyinka Muqdisho oo xiran | XORRIYA NEWS
Home Siyaasadda Qaar kamid ah isgoysyada iyo wadooyinka Muqdisho oo xiran
Qaar kamid ah isgoysyada iyo wadooyinka Muqdisho oo xiran
Waxaa guud ahaan saaka xiran wadooyinka u dhow xarunta Aqalka Sare laga bilaabo isgoyska Taalada Daljirka Daahsoon illaa isgoyska kale ee Maana Booliyo. Waxaa lagu arkayaa ciidamo wata gaadiidka dagaalka oo baabuurta dad weynaha u diidaya inay isticmaalaan.
Sidoo kale, waxa xiran wadada ka timaada dhanka garoonka Eng. Yariisow ee soo hormarta xerada gaadiidka booliska. Shacabka ayaa cagtooda maalaya, waxaana ka muuqday qaarkood daal badan.
Sababta ugu wyen ee isgoysyada iyo wadooyinka loo xiray ayaa waxaa lagu sheegay madaxwaynaha maamulka puntland Saciid Cabdullaahi Deni oo kulan la yeelanayo Guddiga Joogtada ah ee golaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka soomaaliya .
Kulanka ayaa intiisa badan looga hadlayaa arimaha doorashooyinka, marxalada kala guurka ah ee uu dalka maraayo iyo is xog wareysi ku aadan guud ahaan xaalka dalka.
Guddiga joogtada ah ayaa farriimo ayaa lagu wargaliyay in ay soo xaadiraan kulanka oo furmaayo 11:00 barqanimo.
Goddoomiyaha Aqalka Sare iyo qaar kamid ah xildhibaanda Aqalka Sare ayaa khilaaf xooggan kala dhaxeeya madaxweyne Farmaajo, ayaga oo ku eedeeyey in uu marar badan baarmaray sharciga iyo in uusan ahmiyad iyo mudnaan la laheyn Aqalka Sare.
Marna kama aysan jawaabin madaxtooyada Villa Somalia eedaha iyo hadallada kulul ee ka soo baxo guddoomiyaha Aqalka Sare iyo xildhibaanada ka tirsan Aqalka Sare.